Ofeleba → Izimpahla zokuphromotha • Imfekethiso yekhompyutha ye-P & M
Ama-caps wokukhangisa kuyisiphakamiso esithokozisayo sezimpahla zokusebenza nezokukhangisa, zizoba inhlanganisela ehambisanayo ye- Izikibha, amahembe epolo noma ihembe. Kungumnikelo wezingane, intsha kanye nabantu abadala.
Izigqoko iyigajethi yokuphromotha edumile, kanye nemidwebo engayodwana, imvamisa iyisipho samakhasimende nosonkontileka. Lolu hlobo lwegajethi alusebenzi nje kuphela, kepha futhi lungaba ngumkhangiso omkhulu, okwandisa ukuthandwa komkhiqizo. Isipho esiwusizo ngokuqinisekile sizovusa ubudlelwano obuhle futhi, ngenxa yalokho, singakhuphula nentshisekelo enkampanini.
Esitolo sethu uzothola izinhlobo eziningi zekhanda, ehlobo nasebusika. Phakathi kwezigqoko ze-baseball ezine-visor, izigqoko ezithambile ezinomphetho, izibuko, izikhafu, namakepisi afakwe ngocingo, nakanjani uzothola okuthile okukufanele.
Sinamamodeli womhlaba wonke wezingane ezinosayizi abancane.
Idizayini yekhava ngayinye
Njengezimpahla eziningi nezindwangu esitolo sethu, amakepisi angamakwa nganoma yimiphi imidwebo noma imibhalo eqoshiwe. Senza imihlobiso sisebenzisa indlela ukugqokwa kwamakhompyutha noma ukuphrinta kwesikrini. Ngalokhu, okokuqala sidinga isilinganiso
ukuhlinzeka ngemidwebo nosayizi wokusakazwa kokumakwa,
senza ukubonwa ngokuya ngemidwebo etholakele,
ngemuva kokwamukela ukubonwa - siqala ukumaka.
Sineyethu ipaki yemishini, esivumela ukuthi sicubungule ngokushesha i-oda, kuze kube yizinsuku zokusebenza eziyi-7 kusukela lapho inkokhelo ifakwa. Siqapha inqubo yokukhiqiza ukumaka kuzo zonke izigaba, sibonga ukuthi sikwazi ukusabela ngokushesha uma kwenzeka kuba nezinguquko. Ukuxhumana njalo neklayenti, singasheshe sisebenzise noma yiziphi izilungiso.
Imibono evumayo neqembu elikhulayo lamakhasimende ajwayelekile liqinisekisa ikhwalithi ephezulu yemikhiqizo nezinsizakalo. Ukwaneliseka kwamakhasimende kubaluleke kakhulu kithi, ngakho-ke sibheka i-oda ngalinye ngokunakekela okukhulu.
Ukufaka ihluzo ngazinye kumakepisi wokukhangisa kudinga intengo yomuntu ngamunye. Kushiwo inketho yendlela yokumaka, izinga lokuyinkimbinkimbi kwephrojekthi nomzamo odingekayo. Izindleko ze-oda zingaziwa ngaphambi kokuqala komsebenzi, ukulinganisa kukhululekile futhi akuphoqeleli lutho. Ithimba lethu lizokweluleka ngendawo yokumaka, ukukhethwa komkhiqizo ofanele wendlela ekhethiwe, futhi ngenxa yeminyaka eminingi yesipiliyoni, nayo izophendula le mibuzo engajwayelekile.
ama-allegro caps aprintiweizigqoko zikakotini eziphrintiweama-caps asebenzayo nokuphrintaizinkampani zenkampani ezinokuphrintaizigqoko ezigcwele zezingqwembe ngombhalo wakho siquIzigqoko zompheki ezinokuphrintaizigqoko ezenziwe ngezifiso ezinokuphrintaamakhophi wephepha aphrintiweizigqoko zoboya eziphrintiweizigqoko zokukhangisa ezinokuphrintaamakepisi we-snapback anokushicilela kwakhoizigqoko zemidlalo eziphrintiweIzindwangu ze-baseball zezingane ezinokuphrintaizigqoko ze-baseball ezinokuphrintaizigqoko zabesilisa zabesilisa eziphrintiweizigqoko ze-baseball ezinokuphrintaamakepisi we-baseball ngombhalo wakhoamakepisi aphrintiweamakepisi anombhalo we-allegroizigqoko eziphrintiwe ezinganeniizigqoko ezinokuphrinta kweKrakowOfeleba abanokuphrinta kwewizardamakepisi anensangu ephrintiweizigqoko ezenziwe ngokwezifisoofeleba nge-poznań phrintaizigqoko ezinokuphrinta kweWarsawizigqoko ezinokuphrinta kwe-visorizigqoko eziphrintiwe ebusikaamakepisi nokuphrinta kwakhoamakepisi ngombhalo wakho siquamakepisi anombhalo we-allegroizigqoko zesikebhe ezinokuphrinta kwakhoamakepisi ngombhalo wakho weWarsawizigqoko zobusika zabesilisa ezinokuphrintaizigqoko zasebusika ezinokuphrintaizigqoko zasebusika ezinombhalo we-allegroizigqoko zobusika ngephrinta ngokwezifisoizigqoko zasebusika ezinokuphrinta kwakhoizigqoko zasebusika ezinezimpawu zelogo yakhoIzikibha namakepisi abhalwe okuphrintiwe
5 / 5 ( 8 amavoti )